Waxbarasho xer-u-dhalad ah ma loo baahan yahay?! – Garanuug
Home / Aragti / Waxbarasho xer-u-dhalad ah ma loo baahan yahay?!
Maxamed Baashe X. Xasan January 12, 2017	Aragti, Falanqayn Leave a comment 4,473 Views
Maanta ayaandarrada jirtaa waa iyada oo si kaaftooni leh aan ardayga wax loogu barin afkooda hooyo. Tirada hablaha wax baranaysa ee dugsiyada ama jaamacadaha Somaliland ku jirtaa wax aka muuqda kor u kac weyn. Gabadh wax taqaan waxa ay soo saari kartaa qoys wax yaqaan.
• Waraysi: Maxamed Daahir Afrax (Qoraa), Maxamuud Sheekh Axmed Dalmar (Taariikhyahan) iyo Siciid Jaamac Xuseen (Qoraa) iyo maqaallo aan hore u daabacay, gaar ahaan buugga “Guri Waa Haween”.
af-soomaali aragti dhaqan dugsi gumeysi horumar Soomaali waxbarasho	2017-01-12
Tags af-soomaali aragti dhaqan dugsi gumeysi horumar Soomaali waxbarasho
Previous Sababaha Baaba’a Dawladnimo
Next Guudmar iyo Gorfayn Buug: Kitaabul Akhlaaqi Wassiyar fii Mudaawaatin Nufuus
Weydiinta summada u ah qoraalkeennan, inta aynaan ka jawaabin ma isla sii fahannaa farqiga u ...
January January 31: Maalinta ugu dambaysa soogudbinta qoraallada Tartan-curiseedka Aw Jaamac (Taariikh) ee ay qabanayso Garanuug. February ...